Top 5 Android Kaydinta Maareeyayaasha fasaxaysa Android Space Si fudud e
Hadda smartphone noqday qalabka caadiga ah guriga ku nool dadka casriga ah iyo dadka ku tiirsan qalabka. Waxaan kuwaas qalabka waayo, shuqullada aan maalin walba isticmaalaan oo ay la socdaan naga madadaalada. In da'dan digital, dadka da'da ah oo dhan, ururada, shirkadaha si degdeg ah xidhiidhka via telefoonka gacanta, abuurista waraaqaha digital muhiim haatan & dibna sida faylasha qoraal, sawirro, waxyaabaha audio & video, iwm Sidaas, kaydinta xogta waa mid aad u muhiim ah sababta oo ah, kuwaas oo xogta digital uu qiimo muhiimad weyn u tixraaci karo mustaqbalka.
Xogta waxaa la qaban karaa hoose lagu kaydiyo sida RAM ama 'dhisay-in' ama sare kaydinta sida qalab USB, kaararka SD ama barnaamijyadooda kaydinta. Iyo Android uu leeyahay fursado dhowr ah si ay u kaydiso xogta digital. Sida caadiga ah Android telefoonada smart leeyihiin qaabka soo socda ee lagu kaydiyo xogta:
Android leedahay fursado kala duwan oo lagu kaydiyo gudaha ama kaydinta dibadda in uu kaydiyo xogta codsiga our. Sidaa darteed, hadda ayaad u ma u baahan tahay in ay tirtirto xogta aad ka qalab Android si aad u hesho meel bannaan oo lacag la'aan ah, in macluumaadka cusub. Just hubiyo macluumaadka aad kaydinta & maareeyo xogta si sax ah oo ku saabsan qalabka Android aad.
Qaybta 1aad: Sida loo Hubi casriga ah ee Android Kaydinta Qeybta 2: Sida loo xaliyo dhibka Kaydinta Common Android ah "Kaydinta ku filan" Qeybta 3: Top 5 Manager Android Kaydinta Apps Qeybta 4: Poll: Waa kuwee Manager Android Kaydinta App Ma jeceshahay
Qaybta 1aad: Sida loo Hubi casriga ah ee Android Kaydinta
Waxaa had iyo jeer kuu wanaagsan inaad si aad u maamusho smartphone Android, haddii aad ogtahay in xaaladda meel faahfaahsan. Waxaad u baahan tahay si aad u hubiso xaaladda kaydinta inta badan si aad u isticmaali karto meel bannaan oo lagu kaydin jiray oo aad casriga Android si sax ah. Wixii hubinta xaaladda, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoos ku qoran:
1. Just tagaan "Kaydinta" goob of Phone ee Android. Waxay ku siin doonaa xaaladda lagu kaydiyo gudaha guud ee qalabka.
2. Haddii aad rabto in aad ogaato in si faahfaahsan xaaladda shay kasta, riix shayga ka dibna waxa aad ka heli doonaa faahfaahinta meesha.
3. Si aad u hubiso kaydinta dibadda, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan cable USB ah. Tag ah 'Nidaamka' oo ay helaan xaaladda lagu kaydin jiray oo aad USB, SD ama kaydinta dibadda ah. Dhinaca kale, u tag Settings iyo kaydinta heli phone & SD ah. Waxaad heli doontaa xaaladda lagu kaydiyo gudaha ama dibadda oo dhan oo ay la socdaan oo bannaan oo lacag la'aan ah.
Qeybta 2: Sida loo xaliyo dhibka Kaydinta Common Android ah "Kaydinta ku filan"
Marka hore waxaad u baahan tahay in la ogaado in proton aad u yar oo ka mid ah boos oo dhan casriga ah Android waa sooco for 'xasuus System' ee Android. Waayo, haddii aad doonayso inaad cusboonaysiiso ama wax app cusub oo ku saabsan qalabka Android ka dibna aad hesho fariin ah 'kaydinta ku filan heli karo'. Warkani waxaa idiin muuqan doona si lama filaan ah oo laga yaabaa in aad daal ka wakhtigaas. Ha ka walwalin sababtoo ah waxaad hagaajin karaa dhibaatada siyaabaha soo socda:
Xulashada Mid ka mid ah: Nadiifinta Media faylasha iyo Apps aan loo baahnayn
Images qaaday boos weyn oo si aad u guuri kartaa oo sanamyada ama faylasha multimedia in kaarka SD ah oo aad hesho meel bannaan oo lacag la'aan ah. Ka sokow, uninstall ee Chine aan loo baahnayn ka qalab Android ama u guuraan Dalka Chine in ay kaarka SD si aad u hesho meel bannaan oo lacag la'aan ah. Just ay tagaan goobaha kaydinta & xogta lagu kaydiyo ama kala iibsiga gudaha cad in kaarka SD ah.
Xulashada Labaad: Ka dhig RAM Free
Haddii aad horay u rakibay barnaamijyadooda badan oo ka dibna ay barnaamijyadooda socda qabsadeen qaar ka mid ah RAM ah. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay in ay dilaan barnaamijyadooda orodka aan loo baahnayn ama gab barnaamijyadooda xawaaladaha iyadoo la kaashanayo Android Tababaraha xawaaladaha Chine in ay sii RAM xorta ah. Haddii qalabka Android aad leedahay 2GB ama RAM ka badan u baahan tahay inaad ma tahay in la raaco tallaabadaas. Si kastaba ha ahaatee, haddii qalab aad heshay RAM 1 GB ama ka yar aad ka dibna waxa ay noqon doontaa habka wax ku ool u ah qalab aad. Tani waxay sidoo kale ka dhigi doonaa qalab Android aad si dhakhso ah. Ama waxaad isticmaali kartaa Wondershare MobileGo app si aad u nadiifiso RAM aad u.
Xulashada Saddexaad: saar Files Log ah
Files Log degan jeex ah intii xusuusta gudaha. Haddii aad tirto faylasha log ka dibna si fudud aad casriga Android ka heli doontaa qaar ka mid ah meel bannaan oo lacag la'aan ah. Haddii aad wici * # 9900 # markaas waxaad heli doontaa daaqad cusub oo ay la socdaan fursadaha badan oo kala duwan. Just hesho fursada dumpstate ama logcat ka menu pop ah, dooro 'qadaha iyo tirtirto' oo wax miiran.
Xulashada Afar: Nadiifi Cache App ah
App kasta oo lagu rakibay waxaa degan aad meel xusuusta gudaha Android saddex siyaabood, core app, app abuuraa xogta iyo khasnado files. Haddii aad tirtirto ama cadeeyo files khasnado ka dibna waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah meel bannaan oo lacag la'aan ah. Apps sida Google, Chrome ama Google+ abuuri karaan tiro badan oo files khasnado casriga ah aad Android. Just tag 'Settings "qalab, ka dibna dooro" Codsiga', iyo isticmaali 'oo cad cad Cache' doorasho.
Xulashada Five: Isticmaal Cloud
Runtii waa qabow si loo badbaadiyo sawiro aad adigoo isticmaalaya Cloud ah. Photos ama images Korka tiro aad u badan oo ah meel lagu kaydiyo qalabka Android aad. Sidaas, haddii aad badbaadin sanamyada ama sawiro si Cloud ka dibna waxaad awoodi doontaa inaad si loo badbaadiyo bannaan ee lagu kaydin jiray oo qalab aad. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la rakibo app kaydinta Cloud ah, sida WordPress, kaabta G Cloud, Google + aad smartphone. Hadda waxaad tirtiri kartaa tiirarkii ka qalab Android aad sababtoo ah aad horey u bixiyey sanamyadii on kaydinta Cloud ah.
Xulashada Lix: Isticmaal Saddexaad ee Xisbiga App ah
Isticmaalidda app xisbiga saddexaad, waxaad si fudud u maarayn karaan meel lagu kaydiyo Android. Chine ayaa waxaa loogu talagalay si ay u maareeyaan meel aad kaydinta iyo qaar ka mid ah waxaa lagu isufaan dhexdiinna ka mid ah.
Haddii aad tahay xirfadle ah oo aan haysan waqti badan si ay u maareeyaan meel bannaan oo lagu kaydiyo qalabka Android aad ka dibna aad kala soo bixi kartaa oo loo soo dajiyo kasta oo ka mid app Tababaraha kaydinta Android ka Google ciyaari dukaanka app. Just mid click iyo aad maamuli kaydinta.
Qeybta 3: Top 5 Android Kaydinta Manager Apps
Kuwa soo socda 5-ada Manager Android Kaydinta ku qoran yihiin sida ugu fiican ee lagu kaydiyo app ah:
1. Kaydinta Analyser Free 4.6 / 5
2. Disk & Kaydinta Analyzer [Root] $1.99 4.6 / 5
3. Kaydinta Widget + Free 4.3 / 5
5. ahee Manager Kaydinta Free 4.3 / 5
1. Kaydinta Analyser
Kaydinta Analyser waa app awood leh si ay u falanqeeyaan aad kaydinta Android. Waxaad awoodi doontaa inaad si ay u falanqeeyaan Partition nidaamka qalab, gudaha, kaararka SD dibadda ama kaydinta USB ah. Waxaa idin tusin files ee ku kaydsan iyo barnaamijyadooda by size, taariikhda, lambarka faylasha, iwm waxaad ka arki kartaa inta uu le'eg yahay codsiyada ama tirtirto xogta aan loo baahnayn.
Hel dhibaatada: app ayaa soo bandhigi doona barnaamijyadooda ku kaydsan iyo files by size oo ay la socdaan taariikhda. Sidaas waxaad awoodi doontaa inaad si ay u aqoonsadaan dhibaatada iyo xal u helidda dhibaatada.
Sifeey files: App Tani shaandhayn doona faylasha lagu kaydin si fudud si aad u samayn kartaa go'aanka saxda ah si ay u maareeyaan xogta aad.
Nuqul iyo kala iibsiga files: Waxaad si fudud nuqul karo oo ka guurto content kasta. Haddii aad u baahan tahay waxaad badbaadin kartaa files si ay kaarka SD ama qalabka USB.
Xogta la rabin: Waxaa idin ​​tusin doonaa xogta aan loo baahnayn, xogta codsiga saaro, si aad u tirtiri kartaa xogta ka qalab Android aad.
Waxaad heli doontaa taageerada dhabta ah ee kiniinnada.
Macluumaadka lagu soo bandhigi doonaa oo ku salaysan tirada screen qalabka.
Aad fudud oo degdeg badan si ay u isticmaalaan.
App gabi ahaanba waa mid lacag la'aan ah oo aad u.
Ma aha in interface a smart ama design soo jiidasho leh.
Mararka qaarkood waxa aad siin kartaa qalad free size meel lagu kaydiyo ah.
Download Kaydinta Analyser ka Google Play Store >>
2. Disk & Kaydinta Analyzer [Root]
Disk & Kaydinta Analyzer ma aha app oo lacag la'aan ah, laakiin waxa ay sidoo kale ma aha qaali. Waxaad heli kartaa app ee $1.99 oo kaliya. Waxay ku siin doontaa adeegga ugu fiican haddii aad u baahan tahay si ay u maareeyaan files aad ku kaydsan qalab Android aad. App Tani muujin doonaa macluumaad ku saabsan barnaamijyadooda ku kaydsan ah, files multimedia ama xog ku saabsan kaarka gudaha iyo dibadda SD.
Muuqaalaynta: app wuxuu ku siin doonaa muuqaalaynta ugu wanaagsan ee xaaladda lagu kaydiyo meel ka mid ah qalab Android aad. Iyada oo ku saleysan size file waxaa soo bandhigi doonaa shaxda sunburst. Waxaad heli doontaa-fayl sub ama faylasha. Haddii aad riix qaybta wax ka dibna waxaad ka heli doontaa qaybta-hoosaad oo ay la socdaan macluumaad faahfaahsan.
Search doorasho, si fudud Waxaad ka heli doontaa qaybaha file qalabka Android. Waxaad ka heli kartaa xogta by category sida music, videos, waraaqaha, ama ay size sida yar, dhexdhexaad ah, ka weyn, ama taariikhda sida maalin, todobaadka, bisha iyo sanadka. Ka sokow, hab degdeg ah oo raadinaya soo bandhigi doonaa macluumaad ku salaysan category raadinta doortay.
Raadi faylasha weyn: Isticmaalka 10-hab Global file aad si fudud u heli karaan faylasha ugu weyn ku kaydsan qalab Android aad.
Raadi files khasnado ah: Isticmaalka habkaani, waxaad si fudud u heli karaan faylasha lumay ama la qariyey oo ay la socdaan files khasnado on qalab aad ka.
Kaydinta Available: Habkaani aad soo bandhigi doonaa kooban kaydinta heli karo.
Aad smart interface.
App Tani ayaa muuqaalaynta ugu horumarsan iyo is-dhexgal.
Ma jiro wax ad ama virus oo ay la socdaan app this.
Uma shaqeeyo qalabka M8.
Waxay qaadan doontaa $1.99.
Download Disk & Kaydinta Analyzer [Root] ka Google Play Store >>
3. Kaydinta Widget +
Kaydinta Widget + muujin doonaa macluumaad ku saabsan meel lagu kaydiyo Android qaab fudud oo cad infographic. App waxa uu leeyahay widget soo jiidasho leh design qabow. Waxaad resize kartaa widget haddii Android version OS qalab ku qoran yahay, maareeyaan ama kaydka xogta aad daruurta.
Qaabeynta customizable: Waxaad reserved kartaa widget kaydinta iyo hubiyo xogta ku kaydsan ama barnaamijyadooda by nooc oo kala duwan. Ka sokow app this ogolaan doonaa Customization muuqaalka sida asalka, midabka, fursadaha bandhigay kala duwan, noocyada kala duwan ee theme iyo qaabka.
Qalabka Supportable badan: app waxay taageeri doontaa, kaarka gudaha dibadda SD, WordPress, Google Drive, MS Live Skydrive, iyo Box.com.
Raadi files Cache: Waxaad ka heli doontaa dhammaan faylasha khasnado lagu kaydiyaa qalabka Android aad. Just tirto faylasha khasnado iyo aad u hesho qaar ka mid ah meel lagu kaydiyo oo lacag la'aan ah.
Waa app aad u diro daafaca.
Waxaad email u diri kartaa in ay sameeysa ee app ee taageero kasta.
Waa app oo lacag la'aan ah.
Waa arrin aad u exasperating reserved.
Wondershare MobileGo waa kaydinta app ah tababaraha lacag la'aan ah Android. Waxaa sii dayn doonaa inaad ogaato oo ku saabsan faylasha ama galalka in ay yihiin dhaliyay meelaha lagu kaydin jiray oo qalab Android aad.
Falanqeeyaan meel lagu kaydiyo, app Tani falanqeeyaan doonaa dhammaan faylasha lagu kaydiyaa, barnaamijyadooda ama xog ku saabsan kaydinta gudaha iyo dibadda in ay ku tusaan sida badan RAM waxaa loo isticmaalaa.
Nadiif ah Phone: Waxaa iskaan doonaa kayd ah nidaamka, diiwaanka gaarka ah, files junk haraaga ah, iyo files waaweyn oo markaas iyaga la nadiifiyo si lacag la'aan ah ilaa iyo kaydinta dheeraad ah.
Boost App: Waxay kuu ogolaanaysaa inaad kor loogu qaado barnaamijyadooda xawaare ka super in laydin sii ciyaaro music iyo video, sawiro, iyo internet isticmaalo qaado.
App Tani iskaan doonaa oo falanqeeyaan degdeg ah telefoonka aad.
Xoojiso barnaamijyadooda Android inaad ugu fiican.
Diiwaanka Nadiifi gaarka ah, nidaamka khasnado, files junk haraaga ah, iyo files waaweyn inuu ka tago lagu kaydiyo xogta badan oo muhiim ah.
Waxaa ka shaqeeya ee asalka ah iyo daadi batteriga.
Download MobileGo Wondershare ka Google Play Store >>
5. ahee Manager Kaydinta
Ahee Kaydinta Manager App ku siin doonaa adeegyada daruurtii. Waxaad heli doontaa helitaanka daruurtii ahee ka qalab Android. Hadda waxaad awoodaan in ay ku urursan doonaa sanamyadiinna, waraaqaha ama faylasha iyo fayl kale daruurta si nabad ah oo ku hayn karaa meel lagu kaydiyo oo bilaash ah oo ku saabsan qalab Android aad.
.Wadashaqayntaas: Waxaad waafajinta karaa folder Camera, geliyaan ama faylasha iyo waxyaabaha kale ee la qalab Android si aad u kaydinta daruur ahee si toos ah. Ka sokow, waxaad samaysan karta .Wadashaqayntaas u content wax lagu kaydiyo galka qalabka Android aad.
La wadaag taageero: Haddii aad rabto in aad si toos ah u gali codsi kasta oo laga helay ilo kale oo markaas waxaad isticmaali kartaa habkaani. Tani waxay si toos ah u gali doonaan codsiyada. Ka sokow, aad la wadaagto kartaa waxyaabaha ku jira, sawirada, codsiyada, oo xiriir la isticmaalayaasha kale ee adeegga ahee.
Maamulka Resource: Waxaad dhaqaajin karin, nuqul, tirtirto, oo magaca faylasha ama galalka aad ku daruurtii ahee.
Geliyaan ama Download files: Haddii aad rabto in aad ka soo dejisan ama geliyaan faylasha aad ka daruurtii in aad casriga Android ka dibna waxaa la ogeysiin doonaa. Waxaad ka furan kartaa wax files ka view ogeysiis toos ah.
App Tani waa lacag la'aan aad u.
Waxaad edit karaa dukumentigan oo qoraal aad ku kaydsan daruurta ku.
Waxaad heli doontaa Upload dhakhso ah ama xawaaraha download.
Mararka qaarkood waxa ku guuldareysan doonaan inay geliyaan files badan daruurta ku.
Download Manager ahee Kaydinta ka Google Play Store >>
Qeybta 4: Poll: Waa kuwee Manager Android Kaydinta App Ma jeceshahay
3 Tools in SMS Android kaabta in SD Card, PC & Cloud
Bedelka Faylal ay si / ka Android via Cable USB ah
> Resource > Android > Top 5 Manager Android Kaydinta Apps fasaxaysa Android Space Si fudud